” မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း(ရှေးက မန္တလေး-အပိုင်း22)” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ” မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း(ရှေးက မန္တလေး-အပိုင်း22)”
” မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း(ရှေးက မန္တလေး-အပိုင်း22)”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 21, 2010 in Drama, Essays.. | 19 comments
ဒီမန္တလေးက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေအကြောင်းကို သတိတရနဲ့ရေးထားတာတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ မှကိုယ်အမြဲထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုင်လေးတွေကျန်နေသေးတာကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ ဆိုင်ကတော့ ရန်ကုန်မှာနာမယ်ကြီးတဲ့ ဆိုင်လေးနာမယ်နဲ့ မန်းလေးမှာ လာဖွင့် တဲ့ “မုတ်ဆိတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင် “ပါဘဲ။ အဲဒီဆိုင်လေးအကြောင်းပြောရင် ကိုယ်ခံလိုက်ရတာလေးကိုလဲ ပြန်တွေးလို့ရီချင်ပါတယ်။ တစ်ရက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ် ကျနော်ရယ် အဲဒီဆိုင်ကို လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းက ဒီဆိုင်ကို မထိုင်ဘူး ဘူး ဆိုလို့ ကျနော်က ခေါ်လာတာပါ။ စကားတပြောပြောနဲ့ ဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့အချိန် အဖျော်ဆရာက လှမ်းတဲ့ ပြီး “ဘယ်ညာလား “လို့ လှမ်းမေးလိုက်တာကို ခပ်တည်တည်နဲ့လူတတ်ကြီးလုပ်ပြီး ခေါင်ငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ စားပွဲထိုးလေးက ကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရည်လာချပေးတော့ သူငယ်ချင်းက လက်ဖက်ရည်ပုဂံကို သူ့ဖက် ဆွဲယူရင်း ကျနော့်ကို ” မင်းဘယ်တုန်းက ကော်ဖီပြောင်းသောက်တာလဲ “လို့ မေးတော့ ကျနော်က စားပွဲထိုးကို ခေါ်ပြီး ကော်ဖီမမှာတဲ့အကြောင်းပြောတော့ အဖျော်ဆရာက ကျနော်ကို “အာစရိဘဲ ဘယ်ညာဆို “လို့ အပြစ်တင်တဲ့လေသံနဲ့လှမ်းပြောတော့ စိတ်ထဲမှာတော့ မသိတာကို ခေါင်းငြိမ့်မိတဲ့ကောင်ခံလို့ ကို ဘာသာကို အပြစ်တင်ရင်း မကြိုက်တဲ့ကော်ဖီကိုဘဲသောက်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီဆိုင်လေးကတော့ 32လမ်း အခု စီဘီ ဘဏ်-3ရဲ့အနောက်ဖက် သင်္ချာဆရာဦးစောအောင်တို့ အိမ်က ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးပါ။မန်းလေးမြို့မှာ ရနိုင်ခဲတဲ့ ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲတို့ ကြက်သားပလာတာသုတ်တို့ နဲ့ မန်းလေးသားတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလေးပါဘဲ။အခုတော့ အိမ်ရှိလူမှန်သမျ မနားရ စောစောထ မိုးချုပ်မှအိပ်ရတဲ့ဒီအလုပ်ကို နားလိုက်တာကြာပါပြီ။
နောင်တစ်ဆိုင်ကတော့ အခုအချိန်အထိ နာမယ်ကြီး ဆဲမင်းမင်းကျော်ရဲ့ ကောင်တာထိုင်နေကျ သူ့တူမဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးက ခွဲထွက်လို့ ဖွင့်လိုက်တဲ့ ဆိုင်ခွဲတွေလည်း ဖွင့်ထားတဲ့”စိန်ဝင်းဝင်း”ပါဘဲ။သူတို့ကလဲ 85လမ်း (34-35)လမ်းကြား မန်းလေးမြို့မှာ လူတော်တော်များများ မနက်လင်းတာနဲ့ ကျောက်ဝိုင်းဆင်းရမှ ခေတ်မှီတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကတည်းက 84 -85ကြား 34လမ်းမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အမြဲတမ်းလူမပြတ်တဲ့ဆိုင်ပါ။ဒီဆိုင်လေးရဲ့ ဖောက်သည်များကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့အချက်ကတော့ ငွေရေးကြေးရေးသိပ်အဓိက မထားဘဲ ဈေးသက်သက်သာနဲ့ မုန့်ကောင်းကောင်း လက်ဖက်ရည်ကောင်းကကောင်းကို ရောင်းပေးတာရယ် ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးတာရယ်ပါဘဲ။
နောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေထဲမှာ အဖန်ရည်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးသုံးပြီး လက်ဖက်ရည်ဂျိုးများအကြိုက် အကောင်းကြိုက်ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကလဲ 26ဘီလမ်း 89လမ်းအနောက်ဖက်ဒေါင့်မကျတကျမှာ နာမယ်ကြီးခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အကြောင်းပြောရင် သူဖွားဖက်တော် ထပ်တစ်ရာတို့ ပလာတာတို့ နာမယ်ကြီးဆိုင်လေးတွေကို ပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်။ တကူးတကကို သွားလို့ စားခဲ့ရတဲ့ ဆိုင်လေးတွေမို့ ပိုလို့ သတိရပါတယ်။ ” ထပ်တရာပူပူလေးပေးပါ”လို့များပြောမိရင် “ငါ့ဆိုင်မှာအေးတာလိုချင်ရင်တောင်မရဘူး “လို့ခပ်ငေါက်ငေါက်လေးပြောတတ်တဲ့ထပ်တစ်ရာဆိုင်ကတော့ 82လမ်း 27လမ်းဒေါင့်လေးမှာ မနက်စောစောသွားမှ သာ စားရတဲ့ထပ်တစ်ရာဆိုင်လေးပါဘဲ။နေမြင့်တာနဲ့ကုန်ပါတယ်။ မြန်မာဆိုင်ထဲကဆိုရင်23လမ်း 81-82 ကြား ဦးတင်ဦးမူလတန်းကျောင်းမြောက်ဘက်အုတ်တံတိုင်းမှာ ကပ်ဖွင့်တဲ့ ကိုချစ်မွှေးရဲ့ထပ်တစ်ရာနဲ့ ကြက်ဥပလာတာ၊ မြောက်ပြင် လမ်း80 13-14လမ်းကြားမှာဖွင့်တဲ့ လက်ရွေးစဉ်ထပ်တစ်ရာ သူကတော့ သူများထက်နှစ်ချပ်စာလောက်ကို ကြီးသလို ဈေးလဲကြီးပေမယ့် သိပ်ကောင်းပါတယ် သူ့ဆိုင်က ဆိတ်စွတ်ပြုတ်ကလဲ နာမယ်ကြီးပါဘဲ။ နောက်မြောက်ပြင် စည်သာလမ်း မီးပါဈေးနားမှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ “စံပါဘဲထပ်တစ်ရာ” ဒီဆိုင်ကတော့ ကျနော်ကြိုက်လို့ကို လမ်းမကြုံရင်လဲ ကြုံအောင်သွားစားခဲ့တဲ့ ဆိုင်ပါ။ သူ့ထက်ကောင်းပေမယ့်လည်း ကျနော်မရောက်ဘူးလို့မပြောပြနိုင်တဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
နောက်ကျနော်အခုထိသတိရနေတဲ့ မုန့်လေးကတော့ “ဆိတ်စွတ်ပြုတ်နဲ့ချပါတီ”ပါဘဲ။ 81လမ်းနဲ့ 24လမ်းဒေါင့် က ခုံတန်းလျားလေးတွေခင်းထားပြီးဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လို့စားရတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ဆိုင်ရှင်က ကုလားအဖိုးကြီးပါ။ သူ့စွတ်ပြုတ်က သူများစွတ်ပြုတ်တွေလို အရေကျဲကျဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူ့စွတ်ပြုတ်ထဲမှာ ကန်စွန်းဥလို့ မျိုးပါတယ်ထင်ပါတယ် စားရတာ ချိုပြီးအရသာရှိပါတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ချပါတီ 2ချပ်နဲ့စွတ်ပြုတ်တစ်ပွဲကို မ၀ချင်ပါဘူး။နောက် အရင် 26ဘီလမ်းပေါ်က မေတ္တာပေါင်းကူး တံတားနဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ ဆိုင်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေး မှာဖွင့်ထားတဲ့စွတ်ပြုတ်ဆိုင် လေးကလဲ ကောင်းတယ်လို့နာမယ်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် စားချင်ရင် ညပိုင်းမှာ 27လမ်း 82လမ်းဒေါင့်မှာတစ်ဆိုင် 28လမ်းဒေါင့်မှာတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားကြတဲ့စွတ်ပြုတ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်လုံးက ချပါတီကလဲ အကြီး ကြီး နဲ့ စွတ်ပြုတ်ကလဲကောင်းဒါပေမယ့် ဈေးသက်သာတဲ့ ဆိုင်လေးနှစ်ဆိုင်ပါ။
မန်းလေးသူ မန်းလေးသားတော်တော်များများက မနက်မိုးလင်းရင် အဆာပြေတစ်ခါစားမယ်။နေ့လယ် မွန်းမတည့်ခင် ထမင်းစားမယ်။နေ့လည် 2နာရီ သုံးနာရီလောက်ဆိုရင်အဆာပြေတစ်ခါစားမယ်။ညနေခြောက်နာရီလောက်ဆိုရင် ညနေစာထမင်းစားမယ်။ ဒါမှ မတင်းတိမ်နိုင်သူ များက ညလည်စာတစ်ခါစားတတ်တော့ အတော်ကိုစားနိုင်သူများလို့ပြောနိုင်ပါတယ.်။နေ့လည်စာဆိုရင် တစ်ချို့အိမ်များက နေ့လည်ပိုင်းမှ လာတတ်တဲ့ ပဲလွန်းတို့ ထောပတ်ပဲတို့ စွန်တာနီတို့ကို ကြက်သွန်နီလေးပါးပါးလှီးဆီလေးရွှဲရွှဲဆမ်းလို့ ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ မြည်းတတ်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ထမင်းကြမ်းလေးနည်းနည်း လက်ဖက်သုတ်ဂျင်းသုတ်လေးနဲ့အဆာပြေစားတတ်ကြတာ မန်းလေးအကျင့်ပါဘဲ။ နောက်မန်းလေးမြို့မှာသာရနိုင်တဲ့နေ့လည်မှသာရနိုင်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဖက်ကမ်း က “ခိုတောင်” ရွာကနေ လာရောင်းတဲ့ နာမယ်ကျော် ” ခိုတောင်မုန့်တီ “ပါ။ ဒီမုန့်တီရဲ့ထူးခြားချက်က မုန့်ဖတ်ပါ။အဲဒီရွာ က မုန့်သယ်တွေကိုယ်တိုင်လက်ဖြစ် မုန့်တီဖတ်က နူးညံ့ပြီး ချိုတယ်လို့ထင်ရတဲ့ အပြင်မုန့်ဖတ်အရွယ်အစားကလဲ နန်းသေးနဲ့ နန်းလတ်ကြား အနေတော် အရွယ်အစားနဲ့ပါ။ခိုတောင်မုန့်တီက တော့ သတ်သတ်လွတ်မုန့်တီဖြစ်ပြီး ပဲသီးလေးတွေထည့်သုတ်ထားတဲ့ အတွက် စားချင်စဖွယ်မွှေးမွှေးလေးပါ။ သူ့ဟင်းရည်ကလဲ ငံပြာရည်အရသာလေးပင်ပင် အထဲမှာပါတဲ့ မုန်လာထုပ်အိအိလေးရယ် နံနံပင်နံ့မွှေးမွှေးလေးကလည့်းအနံ့ရတာနဲ့ စားချင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီခိုတောင်မုန့်တီသယ်လေးတွေက နေ့လယ်ပိုင်းဆို ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းကနေ ငှက်ကလေးနဲ့ဖြတ် မန်းလေးဘက်ကမ်းရောက်မှာ မုန့်တောင်းလေးကိုခေါင်းပေါ်ရွက်လို့ ကိုယ်ရောင်းနေကြ ရပ်ကွက်လေးတွေကို တလမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက် ရောင်းကြရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ မနက်ပိုင်းဆိုတာနဲ့ ခိုတောင်မုန့်တီ ရနေပါပြီ ။လမ်းဒေါင့်လေးတွေ မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။နေ့လည်ဆိုရင်လဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ရနိုင်ပေမယ့် ကျနော်ကတော့ အဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ ” အာသာပြေ ခိုတောင်မုန့်တီ”လို့ဘဲသတ်မှတ်ပါတယ်။အရသာချင်းက တစ်ခြားစီမို့လို့ပါ။
မန်းလေးသူမန်းလေးသားအများအားဖြင့်က ဈေးတွေ ပွဲရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ ဦးရေကတော်တော်လေးများပါတယ်။ ဈေးချိုမှာ စားစရာစုံပါတယ်။ အရင် ဈေးချိုတော်အဟောင်းတုံးကဆိုရင် အလယ်ပေါက်မှာ ဆိုရင် စားစရာဆိုင်တွေအပြည့် ပါ.(အလယ်ပေါက်က 27လမ်းနဲ့ တည့်တည့် အခုကုန်းကျော်တံတားရှိတဲ့နေရာပေါ့)။အလည်ပေါက်မှာ နာမယ်ကြီးခဲ့တာက ဟင်းရွက်စုံသုတ်၊ထမင်းသုတ်နဲ့ ကြာဆံဟင်းခါး ဆိုင်လေးပါဘဲ။ဒီအလည်ပေါက်ရဲ့မြောက်ဘက်ကအပေါက်ကို မြောက်မလွယ်လို့ခေါ်ပြီနာမယ်ကျော် ဘဲသားဆီချက်ဖြစ်တဲ့ ဘူးသီးဆီချက်ဆိုင်ရှိပါတယ်။ တောင်ဘက်က အပေါက်ကိုတော့ တောင်မလွယ်လို့ခေါ်ပြီး နာမယ်ကြီးမြီးရှည်ဆိုင်ရှိခဲ့ဘူးပါသဗျာ.။ မန်းလေးထမင်းသုတ်ကတော့ အရောင်ရဲရဲလေးနဲ့ စားချင်စဖွယ်လေးပါ.။ထမင်းကို အုတ်ခဲရောင်ရဲရဲလေးဖြစ်အောင်ဆေးဆိုးထားတဲ့ထမင်းရယ် ပဲပုတ် ၊မြေပဲဆံထောင်းစတာတွေကို ကြက်သွန်နီဆီချက်တို့နဲ့ရောသုတ်ထားပါတယ်။ ထမင်းတစ်လုပ်စားလိုက် ကြက်သွန်ဖြူလေး တစ်ကိုက်ကိုက်လိုက်နဲ့ အတော်လေးအရသာရှိပါတယ်။ နောက် ဟင်းရွက်စုံသုတ်ဆိုတာကတော့ စကားပွင့် ၊ကြက်တက်ရွက် ပဲရွက် အစရှိတဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့အ ရွက်လေးတွေကို ကျောက်ပွင့် ပဲကြာဇံ အာလူးတွေနဲ့ ရောပြီးသုတ်စားတာပါ။အသုတ်စုံလို့ခေါ်တဲ့ အတိုင်းအရွက်အတော်များများ ထည့်သုတ်ထားတဲ့ အတွက် ဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့လဲပြောကြပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ မန်းလေးမြို့ရဲ့နေလည်စာ မီနူးစာရင်းကပြောင်းသွားပါပြီ။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ကိုပြုတ်ပြီးအသီးအနှံနဲ့ရောကြော်ထားတာ ဆန်ကြာဆံကို ကြာညို့နဲ့ရောနယ်လို့အသီးအနှံတွေနဲ့ရောက်ကြော်ထားတာကို အသားတုကြော်တုတ်ထိုးတို့ ငါးအရေခွံကြော်သယ်တို့ ၊ကတော့ ရှေးရိုးရာမပျက် ဈေးတောင်းခေါင်းရွက်လို့ အရပ်တကာလယ်ရောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းဒေါင့်တွေမှာရှိတတ်တဲ့ ကော်ပြန်ကြော် ၀က်သားတုတ်ထိုး ကိုရီးယားစတိုင် ကြက်အူချောင်းဝင်အူချောင်းတို့ ရေညှိတို့ ဘာမှန်းမသိတာလေးတွေကို တုတ်ထိုးပြီးကြော်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေကို သာအတွေ့ရများပါတယ်။ကြိုးကြားကြိုးကြားမှတော့ မြန်မာကောက်ညင်းပေါင်းဆိုင်လေးတွေရယ် အကြော်ဆိုင်လေးတွေရယ် ညနေခင်းမှ ဖွင့်တဲ့မန်းလေးစတိုင်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေးတွေကိုတော့ ၀မ်းသာစရာမြင်နေရသေးပါတယ်။
စူပါမတ်ကက် ။စတိုးဆိုင်။ အိမ်ဆိုင်။ကွမ်းယာဆိုင်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၊ကော်ပြန့်ဆိုင်၊တုတ်ထိုးဆိုင်၊ မာလာဟင်းဆိုင်။စည်ဘီယာဆိုင် ၊တစ်ပက်တစ်ရာတန်ဆိုင် အရက်ပုန်းဆိုင် ………………………………………အစရှိတဲ့ဆိုင်တွေကို လမ်းမတန်းမှာ လမ်းဒေါင့်မှာ အိမ်မှာ တိုက်ခန်းမှာ နေရာအနှံဖွင့်တာကို မျက်စေ့ထဲမှာ မြင်လာရပါတယ်။
အဲတော့ ဆက်စဉ်းစားလိုက်တော့ ဆူညံလှူပ်ယှား ညစ်ပတ်နံစော် စည်ကား သိုက်မြိုက် ချစ်စရာဓလေ့တွေနဲ့ ပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ……………………………………………………………………….
ရုပ်ရှင် ရိုက်ချင်တယ်။ ကမ်းလှမ်းမလို့.. ဘယ်သူနဲ့ စကားပြောရမလဲ.. ဇတ်လမ်းကို မဟုတ်ဘူး.. လေးပေါက်ကြီး မင်းတုန်းမင်း အခန်းက ရိုက်ဖို့ မန်နေဂျာ ရှိရင် ဆွေးနွေးဖို့ အကြောင်းပြန်ပါ။
ဆက်သာေ၇းပါဗျာ..။ နောက်လဆန်းလောက် … ပီဒီအက်ဖ်နဲ့ပို့ လိုက်ပါ..။
မန္တလေးသား .. စာေ၇းဆ၇ာကြီးတွေကို ပုံနှိပ်ပြီး ပေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်..။
နောက်လ ၅ရက်နေ့မှာ အယ်လ်အေမှာ စာပေဟောပြောပွဲ၇ှိတယ်လေ..။
ကျနော် ပီဒီဖက်နဲ့ မပို့တတ်ဘူးဗျာ။
ကြိုက်သလိုသာပို့ ပါခင်ဗျား..။ စုစည်းထားတာလေးဖြစ်နေရင် ပြီးတာပါပဲ..။
ဖတ်ပြီး ..သူတို့တတွေ သတိတရနဲ့ လွမ်းကြမှာသေချာပါတယ်..။
မင်းတုန်းမင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဘို့ ငှားချင်တယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
(1)ငွေရေးကြေးရေးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခကိုတော့ ကျွန်ုပ်၏ ငွေကြေးစီမံမူ့ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအရာရှိဖြစ်သူ မဒမ်ပေါက်နဲ့ ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(2)ငွေကြေးကိစ္စပြီးပြတ်လို့ ငှားဖြစ်မယ်ဆိုရင် လေးလအချိန်ပေးရပါမယ်။
သာဘာဝကျအောင် အတုမသုံးလိုတဲ့အတွက် မင်းတုူန်းမင်းလို နုတ်ခမ်းမွှေးအစစ်နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။
(3) ယခုခေတ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များသည်ုနိုင်ငံခြား သရုပ်ဆောင်များကဲ့သို့ မိမိသရုပ်ဆောင်မည့် ဇာတ်ရုပ်ကဲ့သို့ ဈာန်ဝင်အောင် ကြုိးစားခြင်းမရှိဟု အဝေဖန်ခံနေရခြင်းကို ကယ်တင်သည့်သဘောအားဖြင့် မင်းတုန်းမင်းကြီး ၏စိတ်ဓါတ်ကဲ့သို့ အပြည့်အ၀ဈာန်သွင်းလိုသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်နှင့် အတူတွဲဖက်၍သရုပ်ဆောင်မည့် မိဘုရားလောင်းများနှင့်အတူ သုံးလတိတိ ကြိုတင်၍နေထိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါအချက်များ သဘောတူပါက ကျွန်ုပ်မှ သရုပ်ဆောင်ရန်လက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းကြပါကုန် ကျွန်ုပ်ကလည်း ဇာတ်ဝင်ခန်းများတွင်နိုင်ငံတကာအဆင်မှီအောင် ဘရက်ပစ်ကဲ့သို့၎င်း မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်ကဲ့သို့၎င်း ရစ်ချတ်ဂီယာကဲ့သို့၎င်းလီယိုနာဒိုကာပရီယိုကဲ့သို့၎င်း နာမည်မဖတ်တတ်သော ပြင်သစ်မင်းသားများကဲ့သို့ ၄င်း ပီပြင်အောင်ပက်ပက်စက်စက် သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပုံ ကိုပေါက် မန်းတလေး
Rating — PG-18
(အသက်၁၈နှစ်အောက်များ မိဘမပါပဲ တဦးတည်းမဖတ်ရ)
မင်းတုန်းမင်းမှာ .. မိဖု၇ားများနဲ့ ကာမဆက်ဆံပုံဆက်ဆံနည်း ကျမ်းရှိပါတယ်..။ ရုပ်ပုံတွေမှာ နာမယ်လှလှလေးတွေပေးထားတာ ..ကဗျာဆန်လွန်းလို့ .. ကဗျာဆရာတွေငိုလောက်တယ်..။
သမိုင်းပါမောက္ခတယောက်က ပုံနှိပ်ထုတ်ခွင့်တောင်းတာ မရလို့ .. ပေရွက်အတိုင်းသိမ်းထားခဲ့တယ်..။
အဲဒါလေး ပြန်ရှာပြီး အရင်လေ့လာပေါ့နော..။
မန္တလေးသူတွေ .. ကျွန်တော်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြောတာ မင်းတုန်းမင်းလက်ချက်လို့ဆိုပါတယ်..။
မင်းတုန်းမင်းဟာ.. သူ့နန်းတော်နားက ဖြတ်လျှောက်တဲ့ ခြေသံကြားရင်.. “ဘယ်သူလဲဟေ့”လို့..မေးတတ်သတဲ့.။
အဲဒါကို ..ကျွန်မပါလို့ဖြေရင်.. “အေး..ကျွန်မဆို ၀င်ခဲ့” လုပ်လွန်းလို့.. ကျွန်တော်ပါလို့ဖြေကြရသတဲ့..
( ကြားဖူးတာလေး..ေ၇းတာပါနော… မန္တလေးသူတွေ စိတ်တော်မညိုကြေး)
(အသက်၂၈နှစ်အောက်များ မိဘမပါပဲ တဦးတည်းမဖတ်ရ)
အဲဒါမှ ပြသနာဘဲ.. ဆူး အသက် ၂၈ မပြည့်သေးဘူး တော်တော် လိုသေးတယ်။
သရုပ်ဆောင် ငှားရမ်းတာ ခက်ခံတာ စိတ်ဝင်စားတာ ကြားသိရလို့.. ၀မ်းသာပါကြောင်း။
ထုတ်လုပ်သူ ဦးလေးခိုင် မှ ငွေကြေးကိစ္စများ လာရောက်ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်.. ငွေကြေးကိစ္စတော့ အထူး ဆွေးနွေးဖွယ် မရှိပါ။
တခုလောက်မေးချင်တယ်။ မဒမ်ပေါက်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ခ ဆွေးနွေးချက်တော့ ဟုတ်ပါပြီ.. အချက် ၂ နဲ့ ၃ ကို မဒမ်ပေါက် သဘောတူ လက်ခံ သိရှိပြီးသား ဖြစ်ပါသလား။
သဘောတူ မတူ အရင် သွားလက်တို့ လိုက်အုန်းမည်။ ဟီးဟီး..
လေးပေါက် မနက်စောစော မဒမ်ပေါက်မပါဘဲ.. လွတ်လွတ်လပ်လပ် အပြတ်အသပ် အပေါက်သေးသေးလေးကနေ ဟိုချောင်းဒီချောင်း လုပ်ပြီး ဆိုက်မှာ လာကြေညာထားတာ မတိုင်ရသေးဘူး။
ခုတစ်လော ကျွန်တော် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါဟောင်းပြန်ထလာလို့ 
ဆူးက မရိုက်တော့ဘူတဲ့ အစကသူက…
တစ်ခါဆို တစ်ခါထဲပြပါဆိုတာတောင် မပြတော့ပြောတာလေးနဲ့ဘဲကျေနုပ်ခဲ့ရတယ်။
ဆူးမမရေ ကိုပေါက်က သာ ဒီမင်းတုန်းမင်းကြီး လိုသရုပ်ဆောင်လို့ အော်စကာ ဆုရသွားရင် မဒမ်ပေါက်က ခွင့်လွှတ်မှာသေချာပါတယ်။နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးပေါ့ အေရယ် တွေးပူပေါင်ဗျာ.
လေးပေါက်ကြီး က မဒမ်ပေါက်ကို ဘယ်လောက် ချစ်လဲ ဆူး သိတယ်နော်.. ဟွမ်းဟွန်း..
မဒမ်ပေါက်က အိမ်မှာ ပေါက်ရေ.. ဆိုတာနဲ့.. ကိုယ်အခု အိမ်သာထဲ ၀င်လိုက်အုန်းမယ်လို့.. ပြောတတ်တယ် မဟုတ်လား။
ဈေးသွားတုန်းများ.. ပေါက်ရေ.. ဆိုရင် ပဲပင်ပေါက် ၀ယ်တာ မဟုတ်လား..
အပြင်ရောက်နေလို့.. ပေါက်ရေ.. ဆိုတာနဲ့.. ဒန်ပေါက် ထုတ်လေး ကိုင်ပြီး အိမ် အပြန် မဒမ်ပေါက်အတွက် ၀ယ်တယ် မဟုတ်လား။
လေးပေါက်ကြီး မဒမ်ပေါက်ကို ချစ်သက်လက်ဆောင် ပေါက်ပေါက်ဆုပ် ပေးတာ သိပါတယ် နော်.. ဒါနဲ့ မဒမ်ပေါက်က တခါတည်း လက်ခံလိုက်တာနဲ့ မဒမ်ပေါက်ဖြစ်သွားတာ။
နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး လုပ်ပြီး ပေါက်ပေါက်ဆုပ်နဲ့ ထပ်မချော့နဲ့နော်.. ဆူး ပေးထားတဲ့ တိုင်စာတွေ အများကြီး.. ပေါက်ပေါက်ထုတ် ပြန်ပေးလို့.. အိပ်ယာလိပ်ထုတ်ပြီး အိမ်ပေါ်က ဆင်းနေရမယ်။
ချိတ်ချိုးရ၀ူးနော်.. ခင်လို့ နောက်တာ.. လူကြီးက လူငယ်ကို စိတ်ဆိုးရင် လူချိုးကြီး ဖြစ်တတ်တယ်။ သိလား။
ဆရာပေါက်.. ပန်းသေးခေါက်ဆွဲအကြောင်းလည်း သိရင်လုပ်ပါအုံး။
ကြောက်တယ်ရယ်လို့ ခေါ်မလားဘာလားပေါ့ မောင်တော်ပေါက်ရယ်
အတိုင်းအတာကြီးကို တိတိကျကျသိတော့ ဘာရယ်မသိ
နှမပု ရင်ထဲမှာ ခိုးလိုးခုလုနှင့်
မန်းတလေးကို လာလည်ရင် ကိုပေါက် ဂိုက်အဖြစ် ငှားမယ်ဗျို့ ။
ဘဲကင်နဲ့ ဘဲပေါင်းစွပ်ပြုတ်လည်း ရှိရင်လုပ်ပါအုံး။
ဒီပို့မှာ ပလာတာနဲ့ ထပ်တရာမတူကြောင်းပြောဖို့လိုမယ်နေမှာ။ ရန်ကုန်မှာ က ပလာတာလဲ ပလာတာ၊ ထပ်တရာလဲ ပလာတာဘဲ။ သေချာတာက ရန်ကုန်မှာ ပလာတာနဲ့ထပ်တရာ မကွဲဘူးနေမှာ။
လွယ်လွယ်ပြောရရင် မန္တလေးမှာ ပလာတာဆိုတာ လေးထောင့်ပုံဗျာ။ အ၀ိုင်းကို ထပ်တရာလိုခေါ်တယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်ဘဲ ကွာတာဘဲမှတ်လားလို့ ပြောလို့မရဘူး။ စားရတဲ့ အရသာကွာတယ်။ မန္တလေးမှာ ၂ မျိုးစလုံးကို ပဲနဲ့လည်း စားတယ်။ အားလူးဟင်းနဲ့လည်း စားတယ်၊ နောက် သကြားနဲ့လည်းစားတယ်။ တခါတလေ ဟာလ၀ါလိုမျိုး ဆူဂျီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အချိုနဲ့လည်းစားတယ်။ တချို့ ဆီများများနဲ့ ကျွတ်ကျွတ်ကြိုက်တဲ့သူက ပလာတာကို စားတာများတယ်။ ပဲတို့ ဘာတို့ နဲ့ အပျော့ကြိုက်တဲ့သူက ထပ်တရာကို စားကြတယ်။ နောက်မန္တလေးမှာ ရှိသေးတယ်။ လိပ်ခုတ်တို့ ဘာတို့ လိပ်ခုတ်ဆိုတာ ပလာတာတို့ နံပြားတို့ထဲကို ပဲတို့ အာလူးဟင်းတို့ ထည့်ပြီး လိပ်လိုက်တယ် နောက်ဓါးနဲ့ အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ထားလိုက်ပြီး အလိပ်လိုက်လာချပေးတယ် အဲဒါကို မန္တလေးမှာ လိပ်ခုတ်လို့ခေါ်တယ်။
နောက် ရန်ကုန်မှာ ပဲပလာတာလို့မှာလိုက်ရင် ပလာတာထဲကို ပဲပျော့ပျော့ထည့်ထားတဲ့ ဘယ်တုန်းက မှန်းမသိကျော်ထားတဲ့ ခတ်အေးအေး ပလာတာကို လာချပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာက ပဲပလာတာလို့ မှာလိုက်ရင် စားတော်ပဲကို ပြုတ်ပြီး ဟင်းချက်ထားတဲ့ ပဲဟင်းပေါ် ကြက်သွန်နီကျော်လေးဖြူး ပေးထားတဲ့ ဟင်းခွက်ကလေးက တခွက်နဲ့ ခုမှ ကျော်ထားတဲ့ ပလာတာ အလွတ်တချပ်လာချပေးမယ်။ ဒါက ရန်ကုန် ပဲပလာတာနဲ့ မန္တလေး ပဲပလာတာ ကွာခြားချက်ပဲ။
မလွမ်းစကောင်းကတော့ ရပ်ခါနီးမှ ပိုရေးကောင်းနေသလိုဘဲ။
ထပ်တစ်ရာက တော့ ဂျုံကို အခွေလိုက်ကလေးဖြစ်အောင် လုပ်ထားတော့ မုန့်ကအထပ်ကလေးတွေ တစ်ရာပါသလိုဖြစ်နေလို့ ထပ်တစ်ရာလို့ခေါ်တာပါ။
ထပ်တစ်ရာက ဖုတ်ရတာ အခုတော့ ထပ်တစ်ရာကိုကြော်နေကြတော့ အရင်လောက်စားမကောင်းဘူး။
အိမ်မှာ ဘယ်သူကများ cctv စပွန်စာပေးပြီးတပ်သွားလဲ မသိဘူး။
ဆူးမမ က ကျနော်အကြောင်းအကုန်အမှန်အတိုင်းသိနေတယ်နော်